အာရုံကွော အားနညျးနတေဲ့ လက်ခဏာမြား - Barnyar Barnyar
အာရုံကွော အားနညျးနတေဲ့ လက်ခဏာမြား, အာရုံကွောအားနညျးရငျ ဘယျလိုလက်ခဏာတှဖွေဈလာတတျလဲ ?
ခွတှေေ၊လကျတှေ ထုံကဉျြတာဖွဈဖူးတယျမလား။ ရာသီဥတုအေးလို့လညျးမဟုတျပါဘဲ မကွာခဏ ထုံကဉျြတာနရေခကျပါတယျ။ ဗီတာမငျ B12 အားနညျးခွငျးက အာရုံကွောတှကေိုဖုံးအုပျပေးထားတဲ့ အကာအကှယျအလှာကို ထိခိုကျပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။ Crohn’sရောဂါ သို့မဟုတျ တခွားအူလမျးကွောငျးရောဂါတှကွေောငျ့လညျး ဗီတာမငျစုပျယူနိုငျစှမျးကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အရငျကဆို မှုလောကျမှာမဟုတျတဲ့ အအေးဓါတျလောကျကို အခုမှ အရမျးခမျြးတတျနတောမြိုး။ နညျးနညျးအေးတာနဲ့ ကိုယျက ခိုကျခိုကျတုနျနတောမြိုး ခံစားရတယျဆို သှေးအားနညျးနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးထဲမှာ B12 ဓါတျမလုံလောကျလို့ သှေးနီဥတှေ နညျးတာ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါဆို ခွဖြေား၊ လကျဖြားတှေ အေးစကျပွီး တဆတျဆတျတုနျပွီး ခမျြးတတျတာပေါ့။
(3) ဦးနှောကျလုပျဆောငျခကျြတှေ ကမောကျကမဖွဈတာ စိတျဓါတျကတြာ၊ အာရုံရှုပျထှေးတာ ၊မတေ့တျလာတာ၊ အာရုံစူးစိုကျမရတာတှကေB12 အားနညျးရာကနေ ဖွဈလာတဲ့လက်ခဏာတှပေါ။
လူကအားနညျးသလို ဖွဈနတေယျ၊ ကွှကျသားတှေ အားမရှိဘူး၊ ပငျပနျးနုံးခြိနမေယျ၊ ခေါငျးမူးတယျဆိုရငျ အာရုံကွောအားနညျးတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလက်ခဏာတှေ ပိုဆိုးလာတယျ၊ ကွာလာတယျဆိုရငျ ဆရာဝနျပွပွီး အားဆေးသောကျသငျ့ သောကျရပါမယျ။
နှလုံးခုနျမွနျတာလညျး အာရုံကွောအားနညျးတဲ့ လက်ခဏာထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ ကွကျသား၊ ကွကျဥ၊ ငါး တို့ကနေ ဗီတာမငျB12 ရရှိနိုငျပါတယျ။ B12 ခြို့တဲ့တယျဆိုရငျ သှေးအားနညျးခွငျး၊ စိတျအတကျအကမြွနျခွငျး၊ အာရုံကွောထိခိုကျခွငျးနဲ့ တခွားပွငျးထနျတဲ့ ရောဂါတှဖွေဈလာစနေိုငျပါတယျ။
သှားဖုံး သို့မဟုတျ လြှာမှာ အနာလေးတှေ ဖွဈလာတယျဆိုရငျ B12 အားနညျးတာ၊ သှေးအားနညျးခွငျး သို့မဟုတျ တခွားရောဂါအကွောငျးရငျး တဈခုခုကွောငျ့ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
ခံတှငျးပကျြတာ၊ အရမျးပိနျသှားတာ၊ ဝမျးခြုပျတာ စတဲ့ အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးပွဿနာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျထဲမှာ B12 ပမာဏ ခြို့တဲ့လှနျးရငျ ဆရာဝနျပွပွီး အားဆထေိုးသငျ့ ထိုးရပါမညျ။
#Credit to hellosayarwon
အာရုံကြော အားနည်းနေတဲ့ လက္ခဏာများ, အာရုံကြောအားနည်းရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်လဲ ?
ခြေတွေ၊လက်တွေ ထုံကျဉ်တာဖြစ်ဖူးတယ်မလား။ ရာသီဥတုအေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘဲ မကြာခဏ ထုံကျဉ်တာနေရခက်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B12 အားနည်းခြင်းက အာရုံကြောတွေကိုဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့ အကာအကွယ်အလွှာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ Crohn’sရောဂါ သို့မဟုတ် တခြားအူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဗီတာမင်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရင်ကဆို မှုလောက်မှာမဟုတ်တဲ့ အအေးဓါတ်လောက်ကို အခုမှ အရမ်းချမ်းတတ်နေတာမျိုး။ နည်းနည်းအေးတာနဲ့ ကိုယ်က ခိုက်ခိုက်တုန်နေတာမျိုး ခံစားရတယ်ဆို သွေးအားနည်းနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ B12 ဓါတ်မလုံလောက်လို့ သွေးနီဥတွေ နည်းတာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေ အေးစက်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ချမ်းတတ်တာပေါ့။
(3) ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကမောက်ကမဖြစ်တာ စိတ်ဓါတ်ကျတာ၊ အာရုံရှုပ်ထွေးတာ ၊မေ့တတ်လာတာ၊ အာရုံစူးစိုက်မရတာတွေကB12 အားနည်းရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေပါ။
လူကအားနည်းသလို ဖြစ်နေတယ်၊ ကြွက်သားတွေ အားမရှိဘူး၊ ပင်ပန်းနုံးချိနေမယ်၊ ခေါင်းမူးတယ်ဆိုရင် အာရုံကြောအားနည်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေ ပိုဆိုးလာတယ်၊ ကြာလာတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ပြပြီး အားဆေးသောက်သင့် သောက်ရပါမယ်။
နှလုံးခုန်မြန်တာလည်း အာရုံကြောအားနည်းတဲ့ လက္ခဏာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြက်သား၊ ကြက်ဥ၊ ငါး တို့ကနေ ဗီတာမင်B12 ရရှိနိုင်ပါတယ်။ B12 ချို့တဲ့တယ်ဆိုရင် သွေးအားနည်းခြင်း၊ စိတ်အတက်အကျမြန်ခြင်း၊ အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်းနဲ့ တခြားပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
သွားဖုံး သို့မဟုတ် လျှာမှာ အနာလေးတွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် B12 အားနည်းတာ၊ သွေးအားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် တခြားရောဂါအကြောင်းရင်း တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ခံတွင်းပျက်တာ၊ အရမ်းပိန်သွားတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ စတဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ထဲမှာ B12 ပမာဏ ချို့တဲ့လွန်းရင် ဆရာဝန်ပြပြီး အားဆေထိုးသင့် ထိုးရပါမည်။